Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba
u-Morne Morkel usondele kakhulu kwi-10-wicket haul yakhe yokuqala kumsebenzi wakhe njengoba kade ehola ama-Standard Bank Proteas ekunqobeni umdlalo wabo ezinsukwini ezine behlula i-Australia e-PPC Newlands ngeSonto.
Uthathe u-5/23, okubalwa khona ama-wicket amabili emabholeni alandelanayo, ukuhambisana no-4/87 wakhe kwi-innings yokuqala ukumnika i-career-best engu-9/110 kumdlalo. Kube okokuqala ethatha ama-wicket ayisishagalolunye kumdlalo we-Test. Ubizwe njenge-Sunfoil Man of the Match.
Udlale indima ekuphumeni kwabadlali be-Australia kwi-innings yesibili okubabone belahlekelwa ama-wicket angu-10 ngama-runs angu-50 emuva kokuvula umdlalo nge-partnership yama-runs angu-57 phakathi kwa-David Warner no-Cameron Bancroft.
Ama-Australians ebebekelwe irekhodi lomhlaba lama-runs angu-430 ukuze banqobe kulandela o-50 kwi-innings yesibili ba-Quinton de Kock (65 off 97 balls, 8 fours, 1 six) no-Vernon Philander (52 not out off 79 balls, 6 fours, 1 six). Kusho ukuthi ama-Proteas alandele u-199 wabo kuma-wicket amane okugcina njengakwi-Test yase-Port Elizabeth ngama-runs angu-173 kuma-wicket okugcina amahlanu kulesikhathi.
Ama-Proteas anqobe ngama-runs angu-322 kube okwesibili uma kukhulunywa ngama-runs kuhlulwa ama-runs angu-323 kwi-series yango-1970 ngaphambi ngokuthi kuhlanganwe.
Ukuphuma kwe-Australia kuqalwe i-run out ka-Faf du Plessis njengoba abaphosayo bethole ukusekelwe ankundleni yokudlala. u-AB de Villiers no-Aiden Markram bobabili banqake ngendlela emangalisayo besondele kwi-wicket kwathi u-Temba Bavuma naye wathola i-run-out.
Njengoba u-Morkel kufanele ashayelwe izandla ngokuphosa kwakhe, no-Keshav Maharaj udlale indima, njengo-Morkel, usondele kwi-hat trick ngesinye isikhathi.
Manje ama-Proteas abheke e-Bidvest Wanderers Stadium kumdlalo wokugcina we-Sunfoil Test kwi-series bengaphambili ngo-2-1 kanye nethuba lokunqoba i-series ekhaya okokuqala bedlala ne-Australia selokhu kwahlanganwa.
i-Sunfoil Education Trust (SET) ithole imali engango-R254 000 okuphume ko-four no-six abashayiwe kanye nama-wicket atholiwe iwona womabili amaqembu kumdlalo we-Test, okubeka imali ku-R733 000.
u-Morkel ufinyelela ku-300; uhlelela ama-Proteas ukuba ngaphambili i-CSA ihalalisela u-Morne Morkel ngokungena kwiqembu lo-300 u-Cummins uguqula izinto emuva kwekhulu lika-Elgar elinike Ukubuya kwa-Rabada ‘ukuphakamisa’ okukhulu kuma-Proteas – u-Gibson i-CSA yamukela uphumela wesicelo i-CSA iyaqhela kumamaski zika-SBW; iyaxolisa kwi-CA u-Rabada uwaqalisa kahle ama-Proteas nge-‘fifer’ yakhe yesishagalombili u-Du Plessis ufuna kukhulume ikhilikithi i-CSA imemezela iqembu lama-Proteas lamankontileka ka-2018/19 u-Faf udumele kodwa uyaziqhenya ekulweni kweqembu i-Australia iqede i-Test yokuqala emabholeni angu-22